NYI LYNN SECK 18+ DEN: August 2005
Posted by NLS at 8/29/2005 03:45:00 PM 1 comment Links to this post
သမ်းဝေနေတဲ့ဝံပုလွေ ၊အသစ်စက်စက်ခေါင်းတလား ၊မီးလောင်နေဆဲအမှိုက်ပုံ ၊သံချေးအထပ်ထပ်နဲ့သဘေဿငာပျက် ၊
မိုးတိမ်လိုမြင့်မားစွာ ၊ရေသောက်မြစ်လိုနက်ရာစှေိုးင်းစွာ ၊
Poem , Naing Mon Aung Thwin
Posted by NLS at 8/29/2005 08:48:00 AM0comments Links to this post
Kyaw Thiha Soe <> Photography Site
Name : Kyaw Thiha Soe
BEHS : Augustine
Professional : Graphic Designer, Photographer
Chk it Out here :
Posted by NLS at 8/28/2005 09:21:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 8/28/2005 09:00:00 PM3comments Links to this post
ရင်ခွင်ထဲမှာပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်ပါရစေ ပင်လယ်ရေ။
အမြဲမဟုတ်တဲ့ တခါတရံသတိရာစေးခြင်းတွေကိုသာ ငါတောင့်တပါရစေ။
မတှောတဆထွက်မိတဲ့ ကျည်ဆံ နဲ့
Posted by NLS at 8/28/2005 08:48:00 PM 1 comment Links to this post
Posted by NLS at 8/27/2005 03:05:00 PM0comments Links to this post
ကျွန်တှော လိုအပ်တာတွေရှိတိုင်း ကျွန်တှော့မိဘတွေက တတ်နိုင်သလောက် ဖြည့်ဆည်းပေးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှော မပြည့်စုံပါဘူး။ ကျွန်တှော နေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည် ကျွန်တှော လေ့လာ လိုက်စား သင်ယူနေတဲ့ဘာသာရပ် အရာစေားရာဟာ ပိုက်ဆံနဲ့ တန်ဖိုးတွက် တွက်နေရပါတယ်။ ကျွန်တှော မိဘတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တှောသာ သူတို့နေရာမှာဆိုရာစေးင် ကျွန်တှော့လို သားတစ်ယောက်အတွက် စရိတ်စကကို ကျွန်တှော ဘယ်လိုသွားရှာ နိုင်ပါ့မလဲ။ အဲဒါကို စဉ်းစားမိတိုင်း ကျွန်တှော ဘယ်တော့မှ ကလေးမယူဘူးလို့ စဉ်းစားမိတယ်။ ကျွန်တှော ဟာ တကိုယ်ကောင်း ဆန်ကောင်းဆန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှော ကြုံနေရသမျှဟာ ကျွန်တှော့ကို ဒီအခြေအနေမျိုး ဖြစ်အောင် တွန်းပို့နေတယ်။
အနုပညာ လုပ်ချင်တဲ့လက်နှစ်ဘက်ဟာ ပိုက်ဆံအတွက် အလုပ်ကြမ်းလုပ်နေရတာ မတန်ပါဘူး။ ဦးနှောက်နဲ့ အပြည့် တီထွင် ဆန်းသစ်ချင်တဲ့ စိတ်တွေကို ငွေကြေးအတွက် အပင်ပန်း ခံနေရတာ မတရားပါဘူး။
မနက်မိုးလင်းလို့ သာယာတဲ့ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပြီး အတွေးတွေ ကွန့်မြူးနေရမယ့်အစား တရက်စာ နေထိုင် စားသောက်ဖို့ အရေးကို တွေးနေရတာ ရွံရှာဖို့ ကောင်းပါတယ်။ အဲဒါတွေ တွေးမိတိုင်း မြန်မာပြည်က လူချမ်းသာ ဆိုတဲ့သူတွေကို ထိုင်ဆဲနေမိပါတယ်။ ကျွန်တှောတို့ဆီက လူချမ်းသာတွေ ပိုက်ဆံချမ်းသာသလောက် အသိဉာဏ် ခေါင်းပါးပါတယ်။
ဘယ်သူမှ နောက်လူငယ်တွေအတွက် မျိုးဆက်တွေအတွက် နိုင်ငံအတွက် မစဉ်းစားပေးကြပါဘူး။ ကားတစ်စီးကို သိန်းထောင်ချီ ပေးပြီး စီးကြပေမယ့် အများအတွက် စာကြည့်တိုက် ကောင်းကောင်း တစ်ခုလောက် လှူဒါန်းဖို့ကိုတော့ စိတ်ကူးမရှိကြဘူး။ နိုင်ငံရောစေးက နိုင်ငံရေးပါ။ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားက ကိုယ်ကျိုးစီးပွားပါ။ ရင်နာဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တှော မချမ်းသာချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူများနိုင်ငံမှာ အနေအထိုင်ဆင်းရဲတိုင်း ကျွန်တှော ဒေါသထွက်မိပါတယ်။ အင်တာနက်ကောင်းကောင်းတစ်ခုရယ်၊ ကြီးမားစုံလင်တဲ့ စာကြည့်တိုက် ကြီးတွေရယ်သာ ရှိမယ်ဆိုရင် ကျွန်တှော စကဿငာပူမပြောနဲ့ ဘယ်တိုင်းပြည်မှာမှ မနေပါဘူး။ ကျွန်တှောတို့ဘဝက ခဏလေးပါ။ ဒီအတိုင်းသာဆိုရင် နောက်မျိုးဆက်တွေ အားလုံးက ကျွန်တှောတို့ကို ကျိန်ဆဲနေမှာ သေချာနေပါပြီ။
တခါတလေလောက် ခင်ဗျားတို့ လောကကို၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘာအကျိုးပြုပြီးပြီလဲ၊ ဘာအကျိုးပြုဖို့ စဉ်းစား ထားလဲ ဆိုတာလေးကို တွေးသင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်ခု ဖွံဖြိုး တိုးတက်အောင် တည်ဆောက်ရာမှာ နိုင်ငံရေး တစ်ခုတည်း အဓိက မဟုတ်ပါဘူး။
ပညာရေး စီးပွားရေး ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာ အတတ်ပညာ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်။ ကျွန်တှောတို့ ဆီက လူချမ်းသာတွေ ကတော့ တနေ့တနေ့ ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက် ဝင်သလဲ ဆိုတာကိုပဲ တွေးနေကြတယ် ထင်ပါရဲ့ဗျာ။
Posted by NLS at 8/27/2005 02:45:00 PM 1 comment Links to this post
Posted by NLS at 8/26/2005 03:42:00 PM2comments Links to this post
Posted by NLS at 8/25/2005 10:13:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 8/23/2005 08:44:00 AM2comments Links to this post
အသိဉာဏ်သီး ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဥယျာဉ်ထဲအထိပေါ့
Posted by NLS at 8/23/2005 08:29:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 8/23/2005 08:24:00 AM0comments Links to this post
If you areaWindows 2000 user, and If you see this message on your screen :
When you click error report
BCCode: 000000C2 BCP1: 00000007 BCP2: 00000b8a BCP3: f955c940
BCP4: f955c948 OSVer: 5_1_2600 SP : 0_0 Product: 256_1
If You receive the following Stop error message onablue screen:
*** STOP: 0x000000C2 (0x00000007, 0x00000b8a, 0xf955c940, 0xf955c948)
If an error message that is similar to the following is logged in the System event log:
Description: Error code 000000C2, parameter1 00000007, parameter2 00000b8a, parameter3 f955c940, parameter4 f955c948. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Data: 0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E 0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er 0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code 0018: 20 30 30 30 30 30 30 35 00000c2 0020: 30 20 20 50 61 72 61 6d0Param 0028: 65 74 65 72 73 20 66 66 eters ff 0030: 66 66 66 66 64 31 2c
Try to solve this error on windows 2000 from these links below
Posted by NLS at 8/23/2005 08:07:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 8/23/2005 07:38:00 AM0comments Links to this post
History of Kongbaung Dynasty
Their Styles and Titles
Glossory of Royal family language
Posted by NLS at 8/22/2005 02:44:00 PM0comments Links to this post
Myanmar Design , U Aye Myint
Posted by NLS at 8/22/2005 12:22:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 8/12/2005 08:42:00 PM2comments Links to this post
Posted by NLS at 8/12/2005 04:16:00 PM0comments Links to this post
I dont want to know more about others. But I did know too much here. Nonsense! What is the meaning of friendship and relationship? Does it mean really f*king and Stupid? I think so.....
Our people are really crazy. Do you know because of why we used to be others colony? Cuz we've never changed our minds.
Still thinking old groomy golden days.
Still thinking they are the best.
f*king crazy in money.
Money can change people alot
okie. I accept. common sense!
I m sure ... here people changed more than others.
Girls got freedom-------->> you know what they do?
(honestly I dont want to tell this...f*ck! you think your self)
Friendships are broken ( for money )
I dont know why they only look for theirself...crazy selfish.
I did believe in People, esp : friends,Now..........I dont! I don't! I don't! more than that! I couldnt believe at all. for me, money is nonsense. think clearly!
If I have money, I would use it.
If I havent, I would stay alone.
I m okie. I do love to live peacefully and even withafew money. I dont want to know more about people. I Say... Hi Ladies and Gentlemen, Please contact me in linear way. I dont want to see any trick anymore. Now I m better know more about Paul Gauguin, and why he went to Tahiti alone.
Posted by NLS at 8/12/2005 07:20:00 AM3comments Links to this post
Posted by NLS at 8/12/2005 03:53:00 AM3comments Links to this post
golden land :(
Posted by NLS at 8/12/2005 03:40:00 AM0comments Links to this post
they all are very franky...monkey.
we played alot of games while we were in UNI,
we tried to rise up ucsy life.
fallen when we passed.
Posted by NLS at 8/12/2005 03:21:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 8/12/2005 03:17:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 8/12/2005 03:14:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 8/12/2005 03:05:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 8/12/2005 03:02:00 AM0comments Links to this post
I’ll just get to the point. This movie is pretty cool and I like it. The sound, actions, the effects all cool. I think I’m gonna give 8.5/10. This is the movie you should watch. It will definitely make you awake with lots of actions and the sounds!
One part you’ll find very interesting and unexpected is our country being so popular in there. The director didagood job of mixing Myanmar and Thailand where some shots of cars number plates in Burmese numbers andafew similar building structures of “Myo Taw Khan Ma” andadowntown hotel (name I don’t remember of)........... see more here
ref : http://www.7ven.net/
Posted by NLS at 8/11/2005 11:14:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 8/11/2005 10:39:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 8/10/2005 05:03:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 8/10/2005 06:36:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 8/10/2005 01:20:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 8/10/2005 12:23:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 8/07/2005 02:17:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 8/07/2005 02:15:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 8/07/2005 02:03:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 8/07/2005 02:02:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 8/07/2005 01:53:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 8/01/2005 06:20:00 AM 1 comment Links to this post